warkii.com » XOG: Farmaajo oo Qorshe ka bedelan go&rsquo;aankii Dh/mareeb bilaabay & Kheyre oo taako ku ah
XOG: Farmaajo oo Qorshe ka bedelan go&rsquo;aankii Dh/mareeb bilaabay & Kheyre oo taako ku ah
Madaxweyne Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay qorshe u sahli kara inuu ku guuleysto rabitaankiisa ku aadan in doorasho qof iyo cod ah ka dhacda dalka,islamarkaana uu buriyo heshiiskii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb.
Xildhibaano iyo siyaasiyiin ku xiran Villa Soomaaliya ayuu doonayaa madaxweynaha inuu u adeegsado hirgelinta arrintaan,waxaana xalay kulamop gaar gaar ah oo ay lahaayeen Xildhibaanada iyo madaxweyne ka dhacay Madaxtooyada Soomaaliya,sida ilo xog ogaal ah inoogu warameen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u cuntami la’ qaadashada go’aanka doorasho dadban oo dalka uu galayo,wuxuuna ku mindiyaa rabitaankiisa ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo uu aamisan yahay dalka laga qaban karo 2020/21.
Guddoonka Golaha Shacabka marka laga reebo Mahad Cabdalla Cawad ayaa ku raacsan madaxweynaha qorshahan,waxaana Ra’iisal wasaare Kheyre oo ay wehliyaan xubno uu ka mid yahay Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee golaha shacabka iyo madaxda maamul goboleedyada rabaan in la aado doorasho dadban.
Xisbiyada mucaaradka dalka ayaa inta badan soo dhoweeyay go’aankii lagu gaaray Dhuusamareeb oo lagu muujin nooca doorasho,balse loo balamay madal kale oo arrintaas go’aan kama dambeys ah looga gaarayo.
Nooca doorasho ee dalka laga qabanayo 2020/21 ayaa kala qeybisay madaxda ugu sareysa dalka,waxaana arrintaas fogeysay Aqalka sare oo labo garab u kala jabay qaar taageersan guddoomiye Cabdi Xaashi iyo qaar kale oo Villa Somalia ku xirmay.